रातभर जागै बस्दा मेरो निद्रा साइकल रिसेट हुनेछ - BikeHike
म कसरी रातभर मेरो निद्रा चक्र रिसेट गर्छु?
यदि म सुत्न सक्दिन भने म मात्रै बस्नु पर्छ?
के एक रात तपाईंको निद्रा तालिका बर्बाद गर्न सक्छ?
के रातभरी तान्दा तपाईंको निद्रा तालिका ठीक गर्न सकिन्छ?
तपाईं कसरी खराब निद्रा चक्र तोड्न सक्नुहुन्छ?
हरेक रात4घण्टा मात्र सुत्नु खराब हो?
के आँखा बन्द गरेर सुत्नुलाई आराम मानिन्छ?
सबै रातीबाट निको हुन कति समय लाग्छ?
के मेलाटोनिनले निद्रा चक्र रिसेट गर्न सक्छ?
म कसरी मेरो शरीर घडी रिसेट गर्छु?
के सबै रात्रिहरू खराब छन्?
सुत्ने तालिका मिलाउन दिनभर जाग्नुपर्छ?
म रातभरि जागै बसेर आफूलाई कसरी ठीक गर्न सक्छु?
के हरेक २ घण्टामा उठ्नु सामान्य हो?
चाँडै उठ्ने चक्रलाई कसरी तोड्ने?
म किन हरेक रात3बजेतिर उठ्छु?
एलोन मस्क कति घण्टा सुत्छन्?
२ घण्टामा ८ घण्टा कसरी सुत्न सक्छु ?
के5घण्टा सुत्नु भन्दा राम्रो छ?
होइन, जानीजानी रातभर जागा रहनु वा सप्ताहन्तमा सुत्नुले तपाईंको निद्रा तालिका ठीक गर्दैन। वास्तवमा, यी चीजहरू गर्नाले तपाईंको निद्राको तालिकालाई अझ बढी फ्याँक्न सक्छ।
तपाईंको सुत्ने समय तालिका रिसेट गर्नका लागि 10 सुझावहरू तपाईंको सुत्ने समय समायोजन गर्नुहोस्, तर धैर्य राख्नुहोस्। थकान महसुस भए पनि सुत्ने नगर्नुहोस्। भित्र नसुत्नुहोस्, र हरेक दिन एकै समयमा उठ्नुहोस्। आफ्नो सुत्ने तालिकामा अडिग रहनुहोस्। तपाईं सुत्न चाहनु अघि प्रकाशको जोखिमबाट बच्नुहोस्। सुत्ने समयको धेरै नजिक खाने वा व्यायाम नगर्नुहोस्।
यदि तपाईं सुत्नुभएन भने, तपाईंले अन्तमा केही आराम पाउन सक्नुभएसम्म तपाईंको निन्द्रा खराब हुँदै जानेछ। १ देखि २ घन्टा सुत्दा निद्राको चाप कम हुन्छ र रातभरि जागै बस्दा भन्दा बिहान कम थकान महसुस हुन्छ।
राति बेपत्ता भएपछि मानिसहरू चाँडै ओछ्यानमा गएर र भोलिपल्ट सुतेर हराएको निद्रा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन्। यसले निश्चित रूपमा मानिसहरूलाई आराम महसुस गर्न मद्दत गर्दछ, तर नयाँ अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि केवल एक रातको निद्राले चयापचय र सेलुलर जैविक घडीहरूमा नकारात्मक असर पार्छ।
कालो घेराहरू, आँखामुनि झोलाहरू, लगातार हावा, र आफ्नो आँखा खुला राख्न संघर्ष सबै आशा गर्न सकिन्छ जब तपाईं आफ्नो सुत्ने तालिका ठीक गर्न रातभर तान्नुहुन्छ। तर, तपाईंको शरीरमा अझ स्पष्ट, छोटो-अवधिको प्रभावहरू भन्दा बाहिर, रातभर जागै रहँदा तपाईंको शरीरमा दीर्घकालीन प्रभावहरू हुन सक्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको ताल बन्द छ जस्तो लाग्छ भने तपाइँको निद्रा तालिका रिसेट गर्ने केहि तरिकाहरू यहाँ हामी कभर गर्नेछौं। बिहानको उज्यालो हेर्नुहोस्। हप्तामा ३-४ पटक व्यायाम गर्नुहोस्। बिस्तारै आफ्नो तालिका समायोजन गर्नुहोस्। सुत्नुअघि निलो प्रकाशबाट बच्नुहोस्। निद्रा नलिनुहोस्। सुत्नु भन्दा पहिले खाना खानबाट बच्नुहोस्। आरामदायी सुत्ने समयको दिनचर्या अपनाउनुहोस्। क्याम्पिङ यात्रा लिनुहोस्।
प्रति रात सिफारिस गरिएको ७ देखि ८ घण्टाभन्दा कम सुत्ने व्यक्तिलाई हृदयाघात, मोटोपना, डिप्रेसन, मधुमेह र डिमेन्सिया जस्ता दीर्घकालीन अवस्थाहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ, फु र अन्य विज्ञहरू बताउँछन्।
यद्यपि तपाइँको आँखा बन्द गरेर आराम गर्दा तपाइँको REM चक्र सुरु गर्दैन र तपाइँलाई केहि सुत्ने समयमा घडी गर्न अनुमति दिदैन, यसले अझै पनि केहि मोटा लाभहरू प्रदान गर्दछ। आफ्नो आँखा बन्द गर्दा तपाईको दिमाग शान्त हुन्छ र तपाईको मांसपेशी र अंगहरूलाई आराम मिल्छ। धेरैले यसलाई "शान्त जागरण" को रूपमा उल्लेख गर्छन्।
प्रत्येक रात कम्तिमा7देखि 8 घण्टा आराम गर्न यो राम्रो विचार हो। यसले तपाईंको शरीरलाई तालिकामा फर्कन मद्दत गर्नेछ। निद्राको कमीबाट निको हुन दिन वा हप्ता लाग्न सक्छ। केवल 1 घन्टाको निद्राको कमीलाई रिकभर गर्न4दिन लाग्छ।
साना अनुसन्धान अध्ययनहरूबाट प्रमाणहरूले मेलाटोनिन सप्लिमेन्टहरूलाई सम्भावित रूपमा निद्रा-ब्यूँझने चक्र रिसेट गर्न मद्दत गर्दछ। 7र जेट ल्याग भएका व्यक्तिहरूमा निद्रा सुधार गर्नुहोस्। शिफ्ट कामदारहरू - रातको समयमा काम गर्ने मानिसहरू - प्राय: गलत सर्काडियन लयसँग सम्बन्धित निद्रा कठिनाइहरूसँग संघर्ष गर्छन्।
तल केही उपयोगी सुझावहरू छन् जसले तपाईंलाई आफ्नो शरीरको घडी रिसेट गर्न र तपाईंको शटाइको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ। राति नीलो प्रकाशबाट बच्नुहोस्। आफ्नो निद्रा व्यवस्थापन गर्नुहोस्। बिस्तारै ओछ्यानमा नसुत्नुहोस्। अलार्म सेट गर्नुहोस्। सही वातावरण निर्माण गर्नुहोस्। कफीबाट बच्नुहोस्। दैनिक व्यायाम गर्नुहोस्। आफैलाई एक दिनचर्या सेट गर्नुहोस्।
रातभरि जागै बस्नु तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ किनभने यसले तपाईंलाई आवश्यक निद्राबाट वञ्चित गर्छ। अपर्याप्त निन्द्रा र रातभरको समयले तपाईंको शरीरको रोग र संक्रमणको प्रतिरोधलाई कम गर्न सक्छ। खराब गुणस्तरको निद्रा र निद्राको अभावले पनि तपाईंको जोखिम बढाउँछ (३): उच्च रक्तचाप।
सुत्ने र उठ्ने समय छान्नुहोस्। हरेक दिन यी समयहरूमा टाँसिनुहोस्, सप्ताहन्त वा छुट्टीमा पनि। एक देखि दुई घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उठ्न वा सुत्नबाट जोगिन प्रयास गर्नुहोस्। नियमित तालिका पालना गरेर, तपाईंको आन्तरिक घडीले नयाँ दिनचर्या विकास गर्न सक्छ।
यदि तपाइँ रातभरि बस्नुपर्छ भने, निम्न सुझावहरूले तपाइँलाई सुरक्षित रूपमा गर्न मद्दत गर्न सक्छ। अभ्यास गर्नुहोस्। रातभर जाग्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको आफ्नो आन्तरिक घडी रिसेट गर्नु हो। क्याफिन। तर एनर्जी ड्रिंकबाट टाढा रहनुहोस्। एक निद्रा लिनुहोस्। उठ्नुहोस् र सार्नुहोस्। केहि उज्यालो बत्तीहरू फेला पार्नुहोस्। आफ्नो यन्त्रहरू प्रयोग गर्नुहोस्। नुहाउनु।
हामी मध्ये धेरै जसो विभिन्न कारणले राति तीनदेखि चार पटक उठ्छौं, र यसलाई सामान्य निद्राको एक भाग मानिन्छ। यद्यपि, हामीमध्ये धेरैले धेरै पटक, कहिलेकाहीँ रातमा हरेक दुई वा तीन घण्टामा पनि उठ्छौं। यो चिन्ताको कारण हो।
कसरी नियमित व्यायाम गर्दै धेरै चाँडो उठ्न रोक्न। दिउँसो प्रारम्भिक (१ वा २ बजे) पछि क्याफिन र अन्य उत्तेजक पदार्थहरू बेवास्ता गर्दै तपाईंको कोठामा प्रकाश अवरुद्ध गर्दै र यसलाई शान्त, अँध्यारो र आरामदायी राख्ने। तपाईंको घडीमा डिस्प्ले र कोठामा अन्य कुनै पनि साना (वा झिम्किने) बत्तीहरू ढाक्दै।
यदि तपाईं बिहान3बजे वा अर्को समयमा उठ्नुहुन्छ र फेरि निदाउन सक्नुहुन्न भने, यो धेरै कारणहरूको लागि हुन सक्छ। यसमा हल्का निद्रा चक्र, तनाव, वा अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्थाहरू समावेश छन्। तपाईंको बिहान3बजेको जागरण कहिलेकाहीं हुन सक्छ र यो कुनै पनि गम्भीर नहुन सक्छ, तर यस प्रकारको नियमित रातहरू अनिद्राको संकेत हुन सक्छ।
जो रोगन अनुभव पोडकास्टमा भर्खरको उपस्थितिमा, एलोन मस्कले भने कि उनी हरेक रात करिब छ घण्टा सुत्छन् - आवश्यकता अनुसार, नत्र उसको काममा असर पर्छ। डाटा-संचालित मस्क द्वारा त्यो प्रवेश प्रत्येक ओभरवर्क स्टार्टअप संस्थापक वा व्यवसाय प्रबन्धकले मनमा लिनु पर्छ।
जे होस्, निम्न प्रविधिहरूले तपाईंलाई छोटो अवधिको निद्रा अभावबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ। हल्का व्यायाम गर्नुहोस्। सुत्नु अघि एक घण्टाको लागि स्क्रिन समय बेवास्ता गर्नुहोस्। आफ्नो सुत्ने कोठाबाट बाहिर स्क्रिन र अन्य विचलन राख्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कोठा अँध्यारो छ। क्याफिन सेवन कम गर्नुहोस्। स्वस्थ आहार खानुहोस्। रक्सीबाट बच्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ जीवनले कल गर्छ र हामी पर्याप्त निद्रा पाउँदैनौं। तर 24-घण्टा दिनमा पाँच घण्टाको निद्रा पर्याप्त छैन, विशेष गरी लामो अवधिमा। 2018 भन्दा बढी मानिसहरूमा 10,000 को अध्ययन अनुसार, यदि सात देखि आठ घण्टाको दायरामा निद्रा छैन भने शरीरको काम गर्ने क्षमता घट्छ।
के रातभर जागै बस्दा तपाईको निद्रा चक्र रिसेट हुन्छ
द्रुत उत्तर: के उठेर बस्दा मेरो निद्रा चक्र रिसेट हुन्छ
के सबै माथि बस्दा तपाईंको निद्रा चक्र रिसेट हुन सक्छ
प्रश्न: कसरी एक रातमा निद्रा चक्र रिसेट गर्ने
प्रश्न: कसरी प्राकृतिक रूपमा एक रातमा तपाईंको निद्रा चक्र रिसेट गर्ने
Xanax निद्रा चक्र रिसेट गर्न सक्छ
प्रश्न: मेलाटोनिनले निद्रा चक्र रिसेट गर्न सक्छ
द्रुत उत्तर: के तपाईं आफ्नो निद्रा चक्र रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ
प्रश्न: के Naps आफ्नो निद्रा चक्र रिसेट गर्नुहोस्
के उपवासले तपाईंको निद्रा चक्र रिसेट गर्छ?
प्रश्न: कति लामो निद्रा चक्र रिसेट गर्न
प्रश्न: कसरी निद्रा चक्र छिटो रिसेट गर्ने